यी राशिका लागि निकै शुभ मानिन्छ कालो रंग ? खुलाउँछ भाग्यको ढोका – List Khabar
Home / धर्म सस्किर्ती / यी राशिका लागि निकै शुभ मानिन्छ कालो रंग ? खुलाउँछ भाग्यको ढोका
admin August 11, 2021 धर्म सस्किर्ती Leaveacomment 153 Views
काठमाडौँ । हाम्रो दैनिक जीवनमा रंगहरूको ठूलो महत्त्व हुन्छ। यदि संसारमा कुनै रंग हुने थिएन भने, संसार अन्ध्कार देखिनेछ।त्यसैले प्रकृतिले र रगंको रूपमा हामीलाई अमूल्य उपहार दिएका छन्। मानव जीवन रंग बिना उजाड र सुनसान छ।
यस रंगको साथमा मित्रता भनेको तपाई हरेक नराम्रो चीजबाट सुरक्षित हुनुहुन्छ। यसको साथै, कालो रंग हाम्रो ज्योतिषशास्त्रमा केही राशि चिन्हहरूका लागि धेरै शुभ मानिन्छ र यो रंगको लुगा लगाई सबै नकारात्मकहरू तिनीहरूको जीवनबाट हटाइन्छ ।
Previous ६ बर्ष देखिको प्रेममा धोका पाएपछि प्रेमिकै घरमा पुगेर प्रेमिकाले छोडिन संसार